प्रचण्डको प्रस्ताव माथि ईश्वरको काउन्टर
कृष्ण गिरी २३ असाेज
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सचिवालय सदस्य तथा पार्टी एकताको सुत्राधार वामदेव गौतम राजनीतिक जीवनमा धेरै कुराले चर्चामा आउछन् ।
उनी पछिल्लो समयमा राजनीतिक चर्चाको केन्द्रमा आएका छन् । केही महिना पहिला डोल्पाबाट उपनिर्वाचन लड्ने र सांसद बन्ने भनेर चर्चा भयो । जसरी चर्चा भयो त्यसरी उनी डोल्पाबाट सांसद बन्ने सपना तुहियो ।
अथवा डोल्पाबाट निर्वाचित सांसद धनबहादुर बुढाले राजीनामा दिएनन् ।
त्यसपछि पनि सांसद हुने प्रयासमा निरन्तर लागेको नेकपाका केही नेताहरु बताउँछन् । उनले नवलपरासी(पूर्व)बाट पनि सांसद हुन सकिन्छ कि भनेर पहल गरेका नेकपाका एकजना नेताले बताए । त्यसमा पनि उनी सफल हुन सकेनन् । त्यसपछि उनी पुनः आफु बसेको जिल्ला बाँके ३ तर त्यहाँपनि असफलता नै हात लागेको थियो ।
तर गौतलले यतिमा नै हार मानेर बसेनन् । उनले यो प्रयास अहिलेसम्म पनि जारी राखेका छन् ।
सोमबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सचिवालयको बैठकमा जब अध्यक्ष प्रचण्डले गौतमलाई काठमाडौं ७ बाट चुनाव लडाउने प्रस्ताव गरे त्यसपछि गौतम पुनः चर्चाको शिखरमा पुगेका छन् ।
गत निर्वाचनमा काठमाडौं ७ बाट ओली निकट रामबिर मानन्धरले चुनाव जितेका थिए । तीनै मानन्धरलाई राजीनामा गराएर गौतमलाई चुनाव लडाउने प्रस्तावक नै प्रचण्ड बनेपछि नेकपाको सचिवालयमा खैलाबैला मच्चिएको छ ।
यो प्रस्तावको सबैभन्दा पहिलो विरोध सचिवालय सदस्य तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले गरेका थिए । उनले यस्तो गर्दा नराम्रो सन्देश जाने बताएका थिए । उनले भनेका थिए ‘यो गलत हुन्छ ,यो ठिक हुँदैन, यसरी नजाउँ ।’
सांसद रहेका मानन्धरलाई राजीनामा गराएर गौतमलाई उप–निर्वाचन गरेर सांसद बनाउन मानन्धरले सहमति भएको प्रचण्डले बैठकमा प्रस्ताव गरेका थिए । वामदेव गौतमले एक बर्ष पहिला बर्दिया क्षेत्र नं १ बाट ४४ हजार ७६ मत ल्याएका थिए । विजयी हुने संजय कुमार गौतमले ४४ हजार ८ सय २९ मत ल्याएर विजयी भएका थिए ।
बर्दियाबाट पराजित भएका गौतम नै एकमात्र त्यस्ता पात्र हुन् जो पार्टीको सचिवालयमा छन् । उनका अन्य ७ जना सहकर्मीले निर्वाचन जितेका छन् । उनलाई आफुले निर्वाचनमा पराजय भोगेको पीडा सधै बिझ्ने भएको छ ।
उनलाई जसरी पनि सांसद बनाउने वचन प्रचण्डले दिएको बताइन्छ । प्रचण्ड भूमिगत हुँदा देखि नै गौतमसँग राम्रो सम्बन्ध रहेको थियो । पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा बर्दियाबाट पराजित भएपछि सिधै प्रचण्ड निवास नयाँ बजार पुगेका थिए । जब कि पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा माओवादीकी सरला रेग्मीसँग पराजित भएका थिए ।
प्रचण्डका कार्यकर्ताबाट नै पराजित हुँदा पनि गौतम नयाँबजार पुगेका थिए । प्रचण्डसँगको निकटताले पटक पटक गौतमलाई माओवादी भएको आरोप लाग्ने गरेको थियो ।
प्रचण्डको प्रस्ताव पोखरेलको काउन्टर
नेकपाको ९ जनाको सचिवालयमा गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठ भने चुनाव हार्ने ठूला नेता हुन । गौतमले चुनाव हारेपछि पनि पूर्व एमालेमा ठूलै खैलाबैला भएको थियो । एमालेका कार्यकर्ताहरुले नै भोट नहालेको आरोप लागेको थियो ।
उनले निर्वाचन हारेपनि प्रचण्डले भने जसरी पनि गौतमलाई सांसद बनाउन खोजेका छन् । एक महिना पहिला पनि गौतमका बारेमा सचिवालयमा कुरा उठेको थियो । त्यो कुरा उठ्दा अर्का सचिवालय सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले नै त्यसको काउन्टरमा गौतमलाई डोल्पा हो भने मलाई कता हो ? रोल्पा भनेका थिए ।
सचिवालय बैठकमा पटक पटक प्रचण्डले गौतमलाई सांसद बनाउने प्रस्ताव ल्याएपछि अर्का अध्यक्ष केपी ओलीले हुन्छ नि त भनेका थिए । त्यही समयमा अर्का नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले भनेका थिए दुई अध्यक्षले नै सांसद बनाउन चाहेपछि म किन रोक्नु ?
तर सोमबार भने प्रचण्डको गौतमलाई सांसद बनाउने प्रस्तावमाथि अर्का सचिवालय सदस्य तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेले काउन्टर गरेका थिए ।
ओली निकट रहेका पोखरेल पूर्व एमालेका महासचिव हुन । उनले एमालेमा आफुलाई ओली पछिको अध्यक्षको रुपमा हेरेका थिए । दशाैं महाधिवेशनमा आफु नै अध्यक्षको रुपमा प्रस्तुत गर्ने तयारीमा थिए । तर पार्टी एकता भएपछि उनको अध्यक्ष हुने महत्वकाक्षामा ब्रेक लागेको छ ।
अध्यक्ष हुने महत्वकांक्षामा मात्र ब्रेक लागेन ।
शक्तिशाली पार्टीको महासचिव पनि हुन पाएनन् । जब की एमालेको उनी निर्वाचित महासचिव थिए । उनले सोंचेका थिए महासचिव बनाएमा एकिकृत पार्टीको महासचिव आफु नै हो । तर उनको यो सपना पनि मैनको महल झैं भयो ।
उनी भन्दा पछिका व्यक्ति विष्णु पौडेल अन्तिमा आएर महासचिव भए । जबकी महासचिव हुने कुनै चर्चा थिएन । दुई अध्यक्ष रहने र अरु सचिवालयमा बस्ने भन्ने भएको थियो ।
तर अन्तिम समयमा ओलीले सुवास नेम्वाङलाई र वामदेव गौतमले विष्णु पौडेललाई महासचिवमा प्रस्ताव गरेका थिए । गौतमको प्रस्तावको पक्षमा प्रचण्ड लागेका थिए । पोखरेललाई महासचिव हुन रोक्नेमा गौतम र प्रचण्ड नै थिए । यसमा सहमति थियो ओलीको पनि ।
ओली र प्रचण्डको सहमतिमा गौतमको प्रस्तावमा पौडेल राजनीतिमा एकाएक उदाए । तर पोखरेल भने छाँयामा परे । उनले अहिले त्यही मौका लिन पछाडी हटेनन् । नेकपाका एक स्थायी समिति सदस्यले भने ‘ईश्वर पोखरेललाई वामदेव गौतमले आफुलाई महासचिव हुन दिएन भन्ने लागेको छ त्यही भएर उनी गौतमको र प्रचण्डको विरोध गदैछन् ।
यो भन्दा पहिला पनि त दुई ठाउँबाट पराजित भएका माधवकुमार नेपाललाई संविधान सभामा ल्याएकै हो । त्यो समयमा किन बोलेनन पोखरेल ? ’
पूर्वएमालेका एकजना काठमाडौं जिल्ला कमिटी सदस्य पनि पोखरेलको विचारमा सहमत छन् । उनले भने ‘गौतमलाई अब काठमाडौबाट उप–निर्वाचनमा उठाएर सांसद बनाउँदा जनतामा गलत सन्देश जान्छ । उहाँ धेरै ठूलो नेता हो ।
उहाँले अब पदको लोभ नगरेको नै राम्रो ।’
यता मानन्धर भने अहिलेसम्म मिडियामा आउन चाहेका छैनन । उनले आज बेलुका ४ बजे पत्रकार सम्मेलन गरेर राजिनामा दिने नदिने बारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने बताएका छन् ।